Fampianarana Baiboly - Fiangonan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao Soisa
“Ny soratra masina dia Tenin'Andriamanitra ara-tsindrimandry, ny fijoroana ho vavolombelona mahatoky momba ny Filazantsara, ary ny marina sy marina ny fanambarana nataon'Andriamanitra tamin'ny olona. Amin'io lafiny io, ny Soratra Masina dia tsy mety ary fototra ho an'ny Fiangonana amin'ny fanontaniana rehetra momba ny fampianarana sy ny fiainana ”(2 Tim 3,15: 17-2; 1,20 Petera 21: 17,17; Jaona).
Ny mpanoratra ny taratasy ho an'ny hebreo dia milaza momba ny fomba ...
Araka ny fijoroana ho vavolombelona ao amin'ny Soratra Masina, Andriamanitra dia olona iray ao anaty telo mandrakizay, mitovy ary mitovy: Ray, Zanaka ary Fanahy Masina. Izy irery ihany no Andriamanitra marina, mandrakizay, tsy miova, tsy manam-petra, tsy mahay, mahay manaja, manaja. Izy no mpamorona ny lanitra sy ny tany, mpiaro an'izao rehetra izao sy loharanon'ny famonjena ho an'ny olona. Na dia transcendent aza, miasa ...
Andriamanitra, ny Zanaka, dia olona faharoa ao amin'ny Andriamanitra, noforonin'ny Ray hatrizay. Izy no teny sy itovizan'ny Ray - amin'ny alalany ary ho azy no naharian'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Nirahina avy amin'ny Ray ho toy i Jesoa Kristy, Andriamanitra, nambara tamin'ny nofo hahafahantsika mahazo ny famonjena. Nandray ny Fanahy Masina izy ary naterak'i Maria Virjiny ...
Ny filazantsara no vaovao mahafaly momba ny fanavotana amin'ny alàlan'ny fahasoavan'Andriamanitra miorina amin'ny finoana an'i Jesosy Kristy. Ny hafatra dia hoe i Kristy dia maty noho ny fahotantsika, nalevina izy, natsangana tamin'ny andro fahatelo aorian'ny Soratra Masina, ary avy eo dia niseho tamin'ny mpianany. Ny filazantsara no vaovao tsara fa amin'ny alàlan'ny asa famonjena an'i Jesoa Kristy dia afaka miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra isika ...
Ny Fanahy Masina dia olona fahatelo ao amin'ny Andriamanitra ary lasa mandrakizay avy amin'ny Ray amin'ny alàlan'ny Zanaka. Izy no mpampionona nampanantenain'i Jesosy Kristy fa nirahin'Andriamanitra ho an'ny mino rehetra. Mitoetra ao amintsika ny Fanahy Masina, mampiray antsika amin'ny Ray sy ny Zanaka ary manova antsika amin'ny alalan'ny fibebahana sy ny fanamasinana ary amin'ny alàlan'ny fanavaozana lalandava, dia mampiray antsika amin'ny sarin'i Kristy. Ny Fanahy Masina no ...
Ny ota dia ny tsy fanarahan-dalàna, ny fikomiana amin'Andriamanitra. Hatramin'ny fotoana nidiran'ny ota tamin'izao tontolo izao tamin'ny alàlan'i Adama sy Eva, ny olona dia teo ambanin'ny zon'ny ota - zioga iray izay afaka esorina amin'ny fahasoavan'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ihany. Ny toetran'ny olombelona manota dia maneho ny fironana hanasoa ny tenany sy ny tombontsoany manokana momba an'Andriamanitra sy ny sitrapony ...
Ny batisa amin'ny rano - mariky ny fibebahan'ny mpino, famantarana fa manaiky an'i Jesosy Kristy ho Tompo sy Mpanavotra izy - dia fandraisana anjara amin'ny fahafatesan'i Jesosy Kristy sy ny fitsanganan'i Jesosy Kristy. Ny fanaovana batisa "amin'ny Fanahy Masina sy ny afo" dia manondro ny asa fanavaozana sy fanadiovana ny Fanahy Masina. Ny Fiangonan'izao tontolo izao maneran-tany dia mampihatra ny batisa amin'ny alàlan'ny fandrobohana (Matio 28,19; ...
Ny Fiangonana, Vatan'i Kristy, no vondron'izay rehetra mino an'i Jesosy Kristy sy itoeran'ny Fanahy Masina. Ny iraky ny Fiangonana dia ny fitoriana ny filazantsara, ny hampianatra izay rehetra nandidian'i Kristy, ny fanaovana batisa ary ny ahitra ny andian'ondry. Ho fanatanterahana izany didy izany, ny Fiangonana, tarihin'ny Fanahy Masina, dia mandray ny Baiboly ho mpitari-dalana sy mandrafitra ny tenany…
Ny anjely dia noforonina fanahy. Vonona malalaka izy ireo. Ireo anjely masina dia manompo an'Andriamanitra amin'ny maha-iraka sy iraka azy, dia fanahy manompo ireo izay hahazo famonjena ary hiaraka amin'i Kristy amin'ny fiverenany. Ny anjely tsy mankatò dia antsoina hoe demony, fanahy ratsy ary fanahy maloto (Heb 1,14; Apok. 1,1; 22,6; Mt 25,31; 2 Pet 2,4; Mk 1,23; Mt ...
Amin'ny endriny fototra, ny fanekena iray dia mifehy ny fifandraisan'ny Andriamanitra sy ny zanak'olombelona amin'ny fomba mitovy amin'ny fifanarahana ara-dalàna na fifanarahana ara-dalàna. Ny fanekena vaovao dia mandeha satria maty i Jesosy no nanao ny tester. Zava-dehibe ho an'ny mpino ny fahazoana izany satria ...
Ny fiankohofana dia ny valim-bavaka avy amin'ny voninahitr'Andriamanitra. Ny fitiavan'Andriamanitra no vokatry ny fitiavan'Andriamanitra ary avy amin'ny fanambarany ny tenany ho amin'ny zavatra noforoniny. Eo amin'ny fanompoam-pivavahana, ny mpino dia miditra amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra Ray amin'ny alàlan'i Jesoa Kristy, alalàn'ny Fanahy Masina. Ny fiankohofana dia midika koa fa manetry tena sy mifaly amin'Andriamanitra isika ...